Hayadaha Xuquuqul Insaanka Oo Ugu Baaqay Eritrea Inay Sii Deyso Maxaabiista Siyaasadda |
Hayadaha Xuquuqul Insaanka Oo Ugu Baaqay Eritrea Inay Sii Deyso Maxaabiista Siyaasadda
Xidhitaankii dhawaan loo geystay wasiirkii hore ee Maaliyadda Eritrea ayaa ah calaamad muujineysa in wali ay sii socdaan xeeladaha lagu cabudhinayo siyaasiyiinta waddanka Eritrea, inkasta oo isbeddelo diplomaasiyadeed ay ka dhaceen dalkaasi.
Saraakiisha Eritrea ayaa xidhay 17 Sebtember 2018, Abrehe Kidane Berhane oo ah wasiirkii hore ee Maaliyadda, ka dib markii uu ku dhaliilay barta Youtube madaxweyne Isaias Afwerki, isaga oo ku baaqay in la soo afjaro xukunkiisa.
Hay’adda Xuquuql Insaanka ee Human Rights Watch ayaa sii deysay muuqaal ay kasoo muuqdeen maxaabiista u xidhan siyaasadda ee Eritrea oo ay ka mid yihiin saraakiil sar sare oo dowladda Eritrea xilal ka soo qabtay iyo warfidiyeeno, kuwaasi oo
xabsiga la dhigay sanakdii 2001, ka dib markii ay dhaliileen dowladda madaxweyne Afwerki.
“Waxaa jiray rajo ah in isbeddel uu ku imaan karay maxaabiista badan ee ugu xiran Eritrea arrimaha siyaasadda, ka dib markii Itoobiya iyo Eritrea ay heshiis nabadeed gaareen sanadkan, kaasi oo lagu soo afjarayay colaadi soo jiitameysay soddomeeyo sano,” ayey tiri Maria Burnett, oo ah agaasimaha hay’adda Human Rights Wacth ee Bariga Afrika, Balse xiritaanka Berhane ayaa muujinaya in waxba aysan isbeddelin”.
Xidhxidhitaanka dadka ka soo horjeeda siyaasadda Eritrea ayaa wali ah mid iska caadi ah.
Xukuumadda Eritrea ayaa xabsiga dhigtay kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah soddonkii sano ee lasoo dhaafay. Hay’adda Human Rights Wacth ayaana sheegtay in xukuumadda Eritrea ay tahay inay sii deyso dhammaan maxaabiista siyaasadda.
Sannadkii 2001, laamaha ammaanka ee Eritrea waxay xirxireen 11 saraakiil sar sare ah oo ka tirsanaa xukuumadda Eritrea, kuwaasi oo saxiixay dhowr bilood ka hor warqad loo diray madaxweynaha oo ay uga cabanayeen inuu u dhaqmo qaab sharci darro ah.
Waxay doonayeen in la sameeyo guddiga sharci dejinta, in la qabto doorashooyin, iyo in loo ogolaado in axsaabta siyaasaddu ay ka dhaqan galaan dalkaasi. Balse dhammaan codsiyadooda waxba lagama soo qaadin.
Waxaana sidoo kale xabsiga loo taxaabay 11 sarkaal iyo ugu yaraan 10 wariyeyaal kuwaasi oo la sheegay inay baahiyeen warar la xiriira dhaleeceyn loo jeediyay madaxweynaha.
Robel Asrat oo walaalkii Emmanuel uu tifaftire ka ahaa jariidada Zemen markii la xirayay sanadkii 2001, ayaa u sheegay Human Rights Watch dhawaan in aysan arkin walaalkood 17 sano, isaga keliyana ma aha ee saaxiibadiis ayaan sidoo kale la arkin, wax war ahna laga helin.
“Halgankii Eritrea ee madaxbanaanida marnaba ma ahayn ujeedkiisu in aan helno hoggaamiye diktaytar ah. Waxaan u baahannahay mabaa’dii iyo nidaamyo na haga ee uma baahnin shaqsiyaad talada xoog ku heysta inay na hagaan”ayuu yidhi wasiirkii hore ee Maaliyadda Eritrea Berhane.
Sannadkii 2012, Berhane wasiirnimadii ayaa laga qaaday, taasi oo ahayd ciqaab la maroiyo mas’uuliyiinta ka careysiiya madaxweynaha, maadama uu bilaabay inuu ku baaqo isbeddello gudaha ah, inkasta oo marka shaqa joojinta lagu sameeyo mas’uuliyiinta ay sii qaataan mushaarkooda.
Hase yeeshee, labo sano ka dib, Berhane waxuu weydiistay in loo ogolaado inuu iscasilo. Dalabkiisa ayaana loo ogolaaday wixii tan iyo xiligaasi ka dambeeyayna waxuu ahaa shaqo la’aan.
Eritrea wax doorasho ah kama dhicin tan iyo 1993. Isaias ayaanan qudhiisa la dooran waxuuna diiday in la dhaqan geliyo dastuur ay ansxiyeen hay’adda sharcidejinta Eritrea sanadkii 1997.
Sannadkii 2016, guddiga xaqiiqa raadinta ee Qaramadda Midoobay ayaa ogaaday in xukuumadda Isaias ay ku lug lahayd “tacaddiyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqul insaanka” oo ka dhacay gudaha dalka Eritrea bishii July.
Guddigan wuxuu ugu baaqay xukuumadda Eritrea inay u damaanad qaado dhammaan muwaadiniinta dalkaasi inay ka qeyb qaataan fursadaha iyo xaqa ay u leeyihiin ka faa’iideysiga dhammaan qeybaha kala duwan ee hanaanka siyaasadda.
Dhinaca kalena hay’dda Amnesty International ayaa ku baaqaysa in si degdeg ah oo bilaa shuruud ah loo sii daayo wasiirkii hore ee Maaliyadda Eritrea.
” In Mr Berhane Abreh loo xiro hal sabab oo keliya oo ah inuu cadeeyay waxa uu ka aaminsan yahay xaalada ka jirta dalkiisa Eritrea ayaa ah wax laga niyad jabo, taasoo sii xumaynaysa xaaladda dhanka xuquuqul insaanka ee ee ka jirta Eritrea” ayay tidhi Joan Nyanyuki, oo ah agaasimaha hay’adda Amnesty International ee Bariga Afrika, Geeska iyo Great Lakes.
“Waxaa la jooga xilligii maamulka Eritrea ay ixitiraami lahaayeen xaqa ay u leeyihiin dadka Eritrea, xoriyatul qowlka, iyo in loo ogolaado inay si cad uga hadlaan arrimaha la xiriira horumarinta xaaladahooda iyo mustaqbalkooda” ayey sii raacisay Joan Nyanyuki.